कंगना होइन तापसी हुन् बलिउडकी असली ‘क्विन’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मुम्बइ। तापसी पन्नुले विगत केही वर्षमा आफ्नो फिल्मोग्राफीबाट आफ्नै दर्शकवर्ग स्थापित गरिसकेकी छिन् । दक्षिण भारतीय फिल्मबाट करिअर सुरु गरेकी तापसीले बलिउडको मूलधार र अफबिट फिल्मबीचको दूरी कम गराउन सफल भइन् । कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेकी तापसीको लागि स्क्रिप्ट सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । उनी सिस्टमेटिक तरिकाले बलिउडको शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल भएकी छिन् । यद्यपि उनी आफैंलाई सुपरस्टार मान्दिनन् र स्टारडम पाउन अझै लामो यात्रा गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
उनले २०१० मा दक्षिण भारतीय फिल्मबाट करिअर सुरु गरेकी थिइन् । उनले यो करिअरको योजना बनाएकी थिइनन् तर जब राम्रो प्रतिक्रिया पाइन् त्यसपछि उनले अभिनयबारे गम्भीरतासँग सोच्न थालिन् । २०१३ मा डेभिड धवनको कमेडीको साथमा उनले बलिउड डेब्यू गरिन् । तर, २०१५ मा अक्षय कुमारसँग फिल्म बेबीमा १० मिनेटको रोलपछि उनले धेरैको ध्यान तानिन् । आफ्नो सानो रोलकै कारण उनले २०१७ मा अक्षयको फिल्म नाम शबानामा मुख्य भूमिका पाइन् ।
कंगनाको तुलनामा तापसीको फिल्मोग्राफी पनि राम्रो छ । बलिउडमा मात्रै ५–६ वर्षमा उनले बदला र गेम ओभर जस्ता उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म दिएकी छिन् । यसका अलावा उनले मुल्क र पिंक जस्ता शानदार सामाजिक फिल्ममा अहम भूमिका निभाएकी छिन् । मुद्दामा आधारित फिल्मलाई वरियता दिने तापसी आफ्नो अर्को फिल्ममा एक बुढी महिलाको भूमिकामा देखिँदैछिन् । एकपटक फेरि तापसी लिकबाट हटेर रोडमा देखिनेछिन् किनकि बलिउडमा स्टारहरु आफ्नो उमेरभन्दा बढी उमेरको रोलमा चासो दिँदैनन् ।
अर्कोतर्फ कंगना क्विन, ग्याङस्टर, फेशन, तनु वेड्स मनु जस्ता फिल्ममा देखिएकी छिन् । यी सबैमध्ये क्विन मात्र एउटा यतो फिल्म हो जसलाई ग्राउण्ड ब्रेकिङ मान्न सकिन्छ । कंगनाजस्तै तापसी पनि गैर फिल्मी पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन् । उनले पनि शीर्षमा पुग्न निकै संघर्ष गरिन् । तर, उनले कहिल्यै कंगना वा उनकी दिदी रंगोलीले जस्तो अन्य स्टारबारे विवादित बयान दिएर चर्चा बटुल्ने कोसिस गरिनन् ।